चीनले गर्यो बाचा पुरा , नेपाललाई दियो २० हजार थान अक्सिजन सिलिन्डर ! कहिले आउँछ ?
काठमाडौं : चीनबाट २० हजार थान अ’क्सिजन सिलिन्डर नेपाल ल्याइने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चीनले दिएको उक्त अ’क्सिजन सिलि’न्डर चाँडोभन्दा चाँडो
काठमाडौं ल्याउने तयारी सुरु गरेको छ ।हवाइ र स्थल मार्गबाट ती सिलिन्डर झिकाउने प्रयास भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकको विदेशमन्त्रीसँगको भेटपश्चात् भएको छलफलमा चीनले नेपाललाई अक्सि’जन सिलिन्डर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको हो ।
एक साताअघि पाँच विदेशमन्त्रीसँग चीनले भेटघाट गरेको थियो । चीनले दिने भनेको उक्त अक्सिजन सिलिन्डर भि¥त्र्याउने जिम्मा परराष्ट्र, अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिइएको छ । साथै, सरकारले अक्सि’जन सिलिन्डरको माग बढेपछि सिलिन्डर होल्ड नगर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
को’भिड संक’ट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)को शुक्रबार बसेको बैठकमा चीनले सहयोगस्वरुप उपलब्ध गराउने भनेकामध्ये २ हजार सिलि’न्डरलाई जहाजबाट ल्याउने बारे छलफल भएको छ ।
सीसीएमसीको बैठकले ती सबै सि’लिन्डर ल्याउन ३० भन्दा बढी उडान गर्नुपर्ने अनुमान गरेको छ । साथै, हवाइमार्गबाट भन्दा स्थलमा’र्गबाटै सिलिन्डर ल्याउन सहज हुनेभ भएपछि सरकारले स्थलमार्गबाटै सिलिन्डर ल्याउने तयारी थालेको छ ।
थप समाचार : काठमाडौ उपत्यकामा जारी निषे’धाज्ञालाई विहीबारबाट थप कडाइ गरिएको छ । को’रोना भाइ’रस संक्र’मणको जो’खिम बढ्दो क्रममा रहेकाले काठमाडौंमा एक हप्ता निषेधा’ज्ञा गर्दै कडाइ पनि गरिएको हो ।
यसअघिको आदेशमा खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक सामग्री खरिद–बिक्रीका लागि बिहान र बेलुका समय तोकेर खुला गरिएको थियो । बुधबारबाट भने बिहान ९ बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले सङ्क्रा’मक रोग नियन्त्र’ण ऐन २०२० को उपदफा २ बमोजिम पहाडी र हिमाली जिल्लामा दुई सय र काठमाडौं उपत्यका तथा तराईमा पाँच सय स’क्रिय सङ्क्र’मित रहेका जिल्लामा जिल्लाभर वा निश्चित क्षेत्रमा प्रमुख लिल्ला अधिकारीले निषे’धाज्ञा तथा आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।
यस्तै काठमाडौं उपत्यका बाहिर जानका लागि सम्बन्धित पालिकाले अनिवार्य १० दिनको क्वरेन्टाइनमा राख्ने प्रतिबद्ध’तासहितको सिफारिस आवश्यक पर्ने भएको छ ।
सर्वसाधारणले औषधि, खाद्यवस्तु तथा अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वा सेवा खरिदका लागि तथा अत्यावश्यक सेवा लिनुप’र्दा बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घर बाहिर निस्किन पाउने छैनन् ।
यसअघि जारी भएका सबै पास समेत खारेज गरिएको छ । कोरो’ना भाइ’रस सं’क्रमण रोक’थाम तथा नियन्त्र’णका लागि निषेध आदेश जारी गरिएका जिल्लाको संख्या ४६ पुगेको छ ।
२०७८ बैशाख २२, बुधबार १५:४८ गते 1 Minute 265 Views